အိန္ဒိယ ရုံးခွဲ – Saturngod
အိန္ဒိယ မှာ အလုပ်တွေ ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ မသိဘူး။ PHP developer ခေါ်လိုက်တာ .NET သမားတွေကော Java သမားတွေကော အများကြီး လာလျှောက်ကြတယ်။ ပြောထားတဲ့ requirement နဲ့လည်း တစ်ခုမှ မညီဘူး။ resume တွေက အခု ၄၀ ကျော်တယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ ၁ ယောက်ပဲ requirement နဲ့ ညီတာ ရှိတယ်။
Resume တော်တော်များများက အရင်ဆုံး နာမည်။ ပြီးရင် ရခဲ့တဲ့ ဘွဲတွေ တန်းစီပဲ။ ကျွန်တော်သိချင်တာက သူ ဘာတွေ တတ်လဲသိချင်တာ။ ဘာဘွဲ့တွေ ရထားလဲ သိချင်တာ မဟုတ်။ နောက်တချက်က language တွေ စုံနေတာပဲ။ PHP တတ်တယ်။ ASP.NET တတ်တယ်။ Java လည်းရတယ်။ အဲဒါဆို သေချာပြီ သူ တစ်ခုမှ သေချာမတတ်ဘူးဆိုတာကို ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ ဥပမာ။။ PHP နဲ့ web နဲ့ သက်ဆိုင်တာ ၃ နှစ်ရှိသူနဲ့ Java , ASP.NET , PHP , ROR ၃ နှစ် ရှိသူ တစ်ယောက် ရွေးပါဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ PHP တစ်ခုတည်း ၃ နှစ်ရှိသူကိုပဲ ရွေးမယ်။ ရုံးမှာ တကယ်လိုအပ်တာက PHP တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူ။ အဲဒီလို ကောက်ချက်ချပေမယ့်လည်း လျှောက်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ၁ ယောက်ပဲ PHP သမားပါလို့ သူ့ကို ခေါ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် server side တွေအတွက် လူလွှဲလို့ရပြီပေါ့။ အခုက ရုံးမှာက iOS ပိုင်းကို Server Side ပိုင်းကော ၂ ခုလုံး ရေးနေရတာဆိုတော့ လူက ပင်ပန်းတယ်။ အသစ်ခေါ်တဲ့ လူရောက်လာတော့ ပထမ တစ်နေ့ Ava framework အကြောင်းရှင်းပြတယ်။ ရေးပုံသင်တယ်။ နောက်နေ့မှ hg သုံးပုံ သုံးနည်းပြောပြတယ်။ ဘာကြောင့် သုံးရတယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြတယ်။ အိန္ဒိယ က company တော်တော်များများက source code control တွေ မသုံးကြတာလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာ အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေကပဲ မသိတာလားတော့ မသိ။ git မသိ။ hg မသိ။ cvs , svn လည်း မသုံးလာခဲ့။ ဒါကြောင့် အဲဒီ အကြောင်းတွေ ပြန်ရှင်းပြရတာ တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖတ်လိုက်ဆိုရင်တော့ သေချာပြီ လုံးဝ ဖတ်မှာ မဟုတ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်း ရှင်းပြတယ်။ နောက်နေ့မှာ project အကြောင်း ရှင်းပြတယ်။ MindNode နဲ့ ရေးထားတဲ့ API Design ကို ပြလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ လုံးဝကို ရုံးကို မလာတော့ဘူး။ ဖုန်းဆက်လည်း မရ။ email ပို့လည်း reply မပြန်။ နောက်တစ်ရက် စောင့်တယ်။ ရုံးချိန် ကျော်တဲ့ အချိန်ထိ မလာတော့ အလုပ်ထုတ်လိုက်ကြောင်း စာရေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ စာပြန်လာတော့တယ်။ အခွင့်အရေးပေးတဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အများကြီး လေ့လာခဲ့ရကြောင်းဆိုပြီးတော့။
တကယ့်ကို နားမလည်တာ အမှန်ပဲ။ ဒီတစ်ယောက်မှ မဟုတ်။ ရှေ့က iOS developer တစ်ယောက်တုန်းကလည်း ရုံးကို ခွင့်မတိုင်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ခွင့်ယူချသွားပြီး နောက်နေ့မှ email လာပို့တယ်။ သူခွင့်ယူသွားတယ် ။ ဘယ်နှစ်ရက် ယူမယ်ဆိုပြီးတော့။ ဒါနဲ့ ရုံးကလည်း သူ့ကို အလုပ်ထုတ်လိုက်တာပဲ။
ကျွန်တော်ပဲ နားမလည်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် အိန္ဒိယ မှာ ဒါဟာ အဆန်းမဟုတ်တာလားတော့ မသိ။ ရုံးခွဲက UX Designer ကတော့ ပြောတယ်။ ဖုန်းခေါ်လို့ ဖုန်းမကိုင်ရင် အဲဒါ ဒီအလုပ်မှာ မလုပ်ချင်တော့လို့ပဲ။ အိန္ဒိယ မှာ ဒါဟာ ပုံမှန်ပဲလို့ ဆိုတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျွန်တော် မသိပေ။ ဒါပေမယ့် ဒီ company မှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဒါမှမဟုတ် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြီး အလုပ်ထွက်လို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ထွက်ပြေးသွားစရာ မလိုပါဘူး။ ကြည့်ရတာ API design flow ကို ကြည့်ပြီး လန့်သွားလေသလား ဆိုစဉ်းစားမိတယ်။
လက်ရှိ ခေါ်ထားတဲ့ iOS developer တွေက Google မှာ ရှာပါလို့ အတန်တန်မှာထားရတယ်။ error တက်လာရင် run မရဘူး။ error တွေ တက်လာတယ် ဆိုပြီး ခဏခဏ ပြောလွန်းလို့။ နောက်ပြီးတော့ documentation ကို သေချာအောင် မဖတ်ဘူး။ အမှန် ပြီးပြီးရော ဖတ်ပြီး code တွေကို copy ကူးပြီး ရေးတာကော။ ပြီးတော့ run မရတွေ ဖြစ်ကုန်ကော။
စာဖတ်တဲ့ အခါမှာ သေချာ ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ ဘယ်အဆင့်တွေမှာ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲဆိုတာကို သေချာသိဖို့လိုတယ်။ Documentation ကို ပြီးပြီးရော ဖတ်တဲ့အခါမှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေက ပါလာကော။ ဥပမာ။။ facebook iOS SDK မှာ info.plist ကို ပြင်ရမှာ မဖတ်ပဲနဲ့ မရဘူးလို့ ပြောနေသလိုပေါ့။
Google မှာတော့ အိန္ဒိယ လူတော်တွေ အများကြီးပါပဲ။ စကာင်္ပူမှာလည်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယ တွေ အများကြီးပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ် လုပ်နေလို့လား ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့လားတော့ မသိ။ အလုပ်ကို အလုပ်သဘောပဲ လုပ်ကြတယ်။ အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိကြဘူး။ အိန္ဒိယ ရုံးခွဲ အတွက် လူ ၇ ယောက် ငှားဖူးတာ ၁ ယောက်ပဲ သဘောကျတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက အလုပ်ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု လုံးဝ မရှိကြဘူး။ အလုပ်ကို ရုံးချိန်မှာ လုပ်တယ်။ မရရင် မရဘူး error တက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဘယ်လို fix လိုက်လို့ ပြောမှ လုပ်တယ်။ ဒီအတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာဖွေပြီး လုပ်ကြတာ မရှိသလို အလုပ်ပြုတ်မှာလည်းကို မကြောက်ကြတာလား ဒါမှမဟုတ် တခြား အလုပ်လွယ်လွယ်နဲ့ ရှာလို့ ရလို့လား တော့ မသိပါဘူး။
ရုံးမှာ အတူတူလုပ်တဲ့ ပြင်သစ်က အိန္ဒိယ တွေက ဒီလိုပဲလား ? ငတုံးတွေလား ? အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလေ။ ငါတို့ဆီ ရောက်လာတဲ့သူတွေက အသုံးမကျတာနဲ့ တူပါတယ်။ Google , Microsoft , Amazon တို့မှာ လုပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယတွေ အများကြီးပါ။ လူတော်တွေ အကုန် company ကြီးကြီးမှာ လုပ်ကြလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး သူ့မေးခွန်း သူ့ဘာသာသူ ပြန်ဖြေသွားလေသတဲ့။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မေးမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေကော နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ? လူတစ်ယောက် ၂ ယောက် တော်တာ တိုင်းပြည်က လူတွေ တော်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သုံးနေကျ စကားနဲ့ သုံးရရင် Ninja တွေ များများ ရှိဖို့ တိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်တယ်။ team work အားကောင်းဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ ပေးလိုက်တဲ့ Data Flow Design ကို တဖက်လူက မဖတ်တတ်လို့ ပြန်ရှင်းပြနေရရင် ကျောင်းမှာ စာပြန်သင်သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုတာ ကျောင်း မဟုတ်ပါ။ ဆရာ ၊ ဆရာမတွေ မရှိပါ။ သို့ပေမယ့် အထက်က ဆဲ ဖို့တော့ အဆင်သင့် ရှိနေတဲ့ နေရာဆို မှားမယ်မထင်ဘူး။
« Steve Jobs , My Hero HTML5 Offline »
အိန္ဒိယ should be အိန္ဒိယ (န-္ဒ-ိ-ယ)
thank. Masterpiece can’t see :( btw, you should add this rule in keymagic zawgyi :D
You can use TharLon font: http://code.google.com/p/tharlon-font/downloads/list
Works great on Mac and have dotted circles.
also don’t forget to upgrade FontTagger :D upgraded for supporting TharLon font
ဘဲကြီးရေဆောက်ရမ်းကျေးဇူးတင်လို့ဒီမှာဝင်ရေးလိုက်တယ်ဗျာ….. ကျွန်တော့်ဘလော့လေးတစ်နှစ်ပြည့်ပြီလေ..ပထမဆုံးဘလော့လုပ်နည်းလေးကို ရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ..ဒါလေးနဲ့တက်လာခဲ့လို့ပါ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကိုရေ… အစ်ကိုပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ… နည်းပညာတွေထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ရေးနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ…။
I have to gave.
I do not agree the 3rd paragraph of this post.
yes, you can and you can discuss of your point of view.
Steve Jobs , My Hero
မမေးခင် အရင်ရှာ။ မတွေ့မှသာမေး။